रिटालिल्सको आकर्षण - हामी किन प्रिवाइल डायनासोर चाहानुहुन्छ
एक पालतू जनावरको रूपमा हेरविचार र हेरविचार
यो जस्तो एक पूर्ण प्रवृत्ति हो र क्लासिक कुकुर वा बिरालो पूर्ण रूपमा छ। अब जर्मन परिवारमा थप रित्तोहरू र हाम्रा छोराछोरीहरू अब कछुआ, एक किन्को वा टारारूला चाहनुहुन्छ।
हामी केवल हाम्रो टाउको हिलाउन मात्र प्रयोगमा छौँ वास्तव मा एक विकल्प र क्लासिक पाट को एक विकल्प हो। हो, सबै पछि, तपाइँसँग तपाइँको अपार्टमेन्टमा धेरै विशेष पाहुनाहरू छन्। तर बच्चाहरु संग वा सबै संग एक परिवार को लागि वास्तव मा उपयुक्त छ।
के हुन् बच्चाहरु को लागि पालतू जानवर उपयुक्त?
यो अचम्म छ, तर कछुए वा विभिन्न प्रकारका छेउमा हामीलाई हामीलाई लुगा लगाउँछन्, सम्भवतः तिनीहरूले हामीलाई लामो समयको सम्झनाका समय सम्झाउँछन्।
यसको अतिरिक्त, तिनीहरू आफ्नो प्रकृति मा पूर्ण रूपमा फरक छन्, ज्ञात जानवरहरूको विपरीत विपरीत व्यवहार र पनि उपस्थितिमा प्रभावशाली छन्।
हो, रत्न अद्भुत जनावरहरू छन्। तर एक जनाको रूपमा उपयुक्त छ? र छोराछोरीको लागि?
के हामी एक चिट्ठा खरिद गर्नुपर्छ?
पूर्वाधार खरिद गर्ने बारे सोच्नु भन्दा पहिले, जस्तै कि ग्यालेन वा किन्को, तपाई केहि चीजहरु लाई सजग हुनु पर्छ।
पहिलो, एक पुनःप्राप्त प्रकृति मा अपेक्षाकृत निष्क्रिय छ र पूर्णतया हामीलाई हाम्रो बोरिंग। यदि तपाईं स्थायी रूपमा रिटेलको खोजीको आनन्द लिन सक्नुहुन्न भने, तपाईं लामो समयसम्म उनीहरूको साथ प्रसन्न हुनुहुने छैन। खानेकुरा खानेकुरामा पुनरावृत्तिहरू मात्र चल्छ। उपवास को महिना मा सबै भन्दा राम्रो राम्रो छैन।
लेजर को केहि प्रजातिहरु लाई एक दिन मा एक मीटर को स्थानांतरित गर्दैन र यदि हां हो, त केवल यदि हामी यसलाई नहीं देख्छौं। बालबालिकाहरू, विशेष गरी, चाँडो चिकोको साथ तान्नु पर्छ।
पूर्वाधारको साथ तपाईं cuddle गर्न सक्दैन, हिड्नुहोस् वा वरिपरि लैजानुहोस्। साथै, मूर्तिहरू कहिल्यै मानवमा आकर्षित हुँदैनन्। तपाईंलाई यो चाल सिकाउन समय र ऊर्जाको आवश्यकता पर्दैन, यो कहिल्यै सिक्न सक्नेछैन।
पृष्ठ छेउमा रङ - पृष्ठ कछुए रंग
साथै, एक पुनःप्राप्तिलाई निकटता को आवश्यकता छैन वा तपाईं द्वारा पीट गर्न चाहान्छ। यसले तपाईंको ध्यान खोज्दैन। यसको विपरीत, यो टेरारियम बाहिर जानुहोस्, यो बलियो हुनेछ र यो जान्न सक्नु हुनेछ कि तपाईं केहि गर्न सक्नुहुन्न।
पुनरावृत्ति महंगे छन्, र केवल अधिग्रहण चरण मा। कुनै पनि ताप्लेट लैंपको लागि हालको बिजुली खर्च पनि गणना गरिनेछ। यसको अतिरिक्त, राम्रो टेरारियम धेरै सौ यूरो को खर्च गर्दछ, सहायक उपकरण पनि र फीड मासिक 50 यूरो संग पुस्तक मा मासिक को हरा सकते हो।
यदि तपाईं रिटाईलहरूको बारेमा साँच्चै उत्साहित हुनुहुन्न र कहिलेकाँही कहिलेकाहीं उनीहरूलाई रोचक भेट्टाउनुहुन्छ, तपाईले चिट्ठा नगर्नु हुँदैन। यसबाहेक, सबै प्रकारका राइफलहरू बच्चाहरूको हातमा होइनन्। यद्यपि एक कछुआले सानो हागोले बाङ्गोमा बस्ने कोठाबाट खरिद गर्दा शिकायत गर्नुहुँदैन, त्यो पनि उनीसँग प्रेममा पर्दैन।